Chevening Scholarship လျှောက်မယ်ဆိုရင် (၁) - News @ M-Media
in ပညာရေး — August 7, 2017
သြဂုတ် ၇ ၊ ၂၀၁၇
UK နိုင်ငံအစိုးရက ပေးအပ်တဲ့ Chevening Scholarship ၇.၈.၂၀၁၇ က စပြီး ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် လျှောက်လို့ ရပါပြီ။ UK လေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေးလ်စ် (ဝေလ) နဲ့ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် နိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်တွေမှာ တစ်နှစ်စာ မဟာဘွဲ့ သင်ကြားနိုင်စေဖို့ ပညာသင်စရိတ် (ကျောင်းစရိတ်၊ နေ၊ စား၊ အသွားအပြန် ခရီးစရိတ်) အစအဆုံး UK အစိုးရဘက်က တာဝန်ယူတာ ဖြစ်လို့ မိမိတို့ဘဝ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက် အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ပြီး လျှောက်သင့်တဲ့ ပညာသင်ဆုကြီး တစ်ခုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျောင်းသားဦးရေ နှစ်စဉ် တိုးမြှင့်ပြီး ခေါ်နေပါတယ်။ အရင်က တစ်နှစ်ကို နှစ်ဦးသုံးဦးသာ ခေါ်ရာက အခုအခါ ဆယ်ဂဏန်း ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့နှစ် (၂၀၁၆-၁၇) မှာ ၁၂ ဦးရှိပြီး လာမည့်နှစ်မှာ ဒီထက်များတယ် သိရပါတယ်။
* ဘွဲ့တစ်ခု ရရှိထားပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် အချိန်ပြည့် လုပ်ဖူးသူ
* ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အဆက်အသွယ်ရှိသူ (leadership and networking skills)
* မိမိဘဝမှာ ဘာ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိပြီး အဲဒီ ရည်မှန်းချက်အတွက် UK မှာ ပညာသင်ယူခြင်းက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားသူ
* UK နိုင်ငံမှာ မဟာတန်း တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ဖို့ရာ အရည်အချင်း ပြည့်မီထားသူ
* UK မှာ တစ်နှစ်တာ ပညာသင်ယူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရော မိမိဝန်းကျင်ကိုပါ အကျိုးတစုံတရာ ပြုပေးနိုင်မယ့်သူ …. စတဲ့ အချက်တွေကို အခြေခံ ရွေးတဲ့ ပညာသင်ဆုပါ။
* Chevening ဘက်က ပညာသင်ဆုပေးမယ့်နိုင်ငံသား ဖြစ်ရပါမယ်။
* ပညာသင်ယူအပြီးမှာ အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် ပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။
* UK တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုက ကျောင်းတက်ခွင့်ပြုထားကြောင်း unconditional offer ကို လာမည့် ၁၂၊ ၇၊ ၂၀၁၈ နောက်ဆုံးထားပြီး တင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ (တစ်နှစ်နီးပါး အချိန်ရပါသေးတယ်)။ UK မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှာ မိမိတက်ရောက်လိုတဲ့ ဘာသာရပ် စုစုပေါင်း သုံးခု လျှောက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကနေ တစ်ခုကို တက်ရောက်ခွင့် ရပါမယ်။
* အရင်က UK အစိုးရရဲ့ ပညာသင်ဆု ရဖူးပြီး UK မှာ ပညာသင်ဖူးသူ မဖြစ်ရပါဘူး။
* အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် ပြည့်မီရပါမယ်။ ၁၂၊ ၇၊ ၂၀၁၈ နောက်ဆုံးထားပြီး တင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ ဖြေဆိုလို့ရတဲ့ စာမေးပွဲ လေးငါးမျိုး ရှိပါမယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် Academic IELTS Overall Band 6.5, individual band 5.5 အနည်းဆုံး ရ ရပါမယ်။ ဒါသည် Chevening ဘက်က သတ်မှတ်တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေဘက်က ဒီထက် ပို ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ် တောင်းတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျောင်းတွေဘက်က တက်ရောက်မယ့် course ပေါ် မူတည်လို့ IELTS Overall Band 6.5 to 7, individual band 5.5 to 6.5 တောင်းတတ်ပါတယ်။ Chevening ဘက်က ၁၂၊ ၇၊ ၂၀၁၈ထိ ခွင့်ပြုထားပေမယ့် အဲဒီရက်မှာ ကျောင်းဝင်ခွင့်လည်း ရထားရမှာဖြစ်လို့ မေလထက် နောက်မကျဘဲ ဖြေထားပြီးသား၊ ပြည့်မီထားပြီးသား ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ website မှာ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားရပါမယ်။
လျှောက်ထားသူတွေထဲက ပဏာမအဆင့် အင်တာဗျူး ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကို ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်မှာ အကြောင်းကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ (အရွေးမခံရရင်လည်း မခံရကြောင်း regret letter ရပါလိမ့်မယ်။) အဲဒီအခါ အင်တာဗျူးအတွက် ရက်သတ်မှတ်ပြင်ဆင် appointment ယူရင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မိမိကို ထောက်ခံပေးမယ့်သူ နှစ်ဦးရဲ့ reference letter ကို ထပ် တင်ပေးရပါမယ်။ (ဒါ မတိုင်ခင် လျှောက်လွှာ တင်စဉ်ကတော့ မိမိကို ဘယ်သူဘယ်ဝါက ထောက်ခံပေးမှာဖြစ်ကြောင်း referee နှစ်ဦးရဲ့ နာမည် ရာထူး စတာတွေကို ဖြည့်ထားပေးပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။)
မတ်လ ကနေ မေလ အတွင်း အင်တာဗျူး လုပ်အပြီးမှာ ဇွန်လဆန်းမှာတော့ နောက်တစ်ဆင့်ထိ အရွေးခံရသူတွေကို ထပ် အကြောင်းကြားပါမယ်။ အဲလို အကြောင်းကြားတိုင်း သေချာပေါက် တက်ရပြီ ဆိုမရသေးပါ။ တက္ကသိုလ်ဘက်က ကိုယ့်ကို ကျောင်းတက်ခွင့်ပြုတဲ့ unconditional offer ရ ရပါမယ်။ ဆေးစစ်ရပါမယ် (TB အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်နေခြင်း ရှိမရှိကို ရန်ကုန် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံကြီးမှာ စစ်ရပါတယ်)။ ဒီအဆင့်တွေအထိ အောင်မြင်ခဲ့ပြီ ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေဟာ UK ရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေမှာ မဟာတန်း တစ်နှစ် ပညာသင်ယူနိုင်ပြီပေ့ါ။
ကျောင်း လျှောက်ပုံ၊ reference တောင်းပုံ စတာတွေကို ထပ် တင်ပေးပါဦးမယ်။ application form က online ကနေပဲ တင်ရမှာပါ … ဒီနေ့ (၇. ၈. ၂၀၁၇) က စ ဖွင့်ပြီ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသူများ စတင် ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါပြီ။
ဒီလင့်ခ် http://www.chevening.org/apply/eligibility-criteria မှာ မိမိအရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပြီး ၀င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Tags: Chevening, Education, kyawmoeaung, scholarship